Home » Na-agbasa News Travel » Ndị America na-efegharị na ndekọ ndekọ na Hawaii Resorts na osimiri ọzọ
Ndị America na-efegharị na ndekọ ndekọ na Hawaii Resorts na osimiri ọzọ
Hawaii Tourism Authority na-agbachi nkịtị. Ndị isi ụlọ nkwari akụ achọghị ikwu okwu, Hawaii ga-abụrịrị ọla nzuzo.
Mpi ndị na-asọmpi amabeghị, mana Hawaii na-edekọ ọnụ ọgụgụ ndị bịarutere n'ọnwa a ma ọ nwere ike ịbawanye ụba.
Iilọ ọrụ njem njem na njem nke Hawaii na-enwe nlọghachi a na-atụghị anya ya
Na emechibidoro oke mba ụwa, Hawaii tụkwasịrị obi ugbu a n'ahịa ụlọ nke US, mana nke a nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya.
Hawaii ghọrọ onye asọmpi siri ike na Caribbean maka ndị ọbịa America
Ndị na-agba egwu Hula na-amalite ịmụmụ ọnụ ọchị ọzọ, emeghere ụlọ mmanya, ọtụtụ ụlọ ahịa na-arụsi ọrụ ike, ọtụtụ ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ na Waikiki na ebe ndị ọzọ na Hawaii na-emepe. Ọ nwere ike were otu awa ma ọ bụ karịa iji nweta tebụl na ụlọ oriri na ọ popularụ popularụ ndị a ma ama dị ka Osisi Osisi dị na Ala Moana Shopping Center ma ọ bụ Turkish Restaurant Istanbul na Kakaako.
Ọnụ ego ụlọ oriri na nkwari akụ abụghị n'ezie ọnụ ahịa, ụlọ obibi na-eto na Hawaii.
Hawaii dị mma, dị ala COVID-19 na Island State bụ ebe ama ama ama ama ama ama ama America.
Otú ọ dị, ventionlọ Mgbakọ ahụ gbahapụrụ, ebe a na-ezukọ na-ejighị ya, mana ụlọ obibi nkwari akụ dị elu, osimiri na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala na-ebugharị ụgbọala site na ebe a na-adọba ụgbọala na ọdụ ụgbọ elu.
Onye ọ bụla na-eyi a nkpuchi, onye ọ bụla na-anabata na-elekọta mmadụ distancing, e nweghị arụmụka ma ọ bụ ọgụ banyere na na Aloha Mmụọ nke Lovehụnanya na ọmịiko yiri ka ha na-efe efe. Nke a bụ ọnọdụ taa na 50th US State of Hawaii.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ala mba ka mechiri maka ndị America, ezumike na Hawaii abụrụla ihe ezi uche dị na ndị America.
N'ịgbanahụ COVID-19 steeti, ndị ọbịa si n'ụlọ na-efega n'àgwàetiti Oahu, Maui, Island nke Hawaii, na Kauai site n'akụkụ nile nke United States. A na-ekwuputa ma ọ bụ na-emezigharị ụgbọ elu ọhụrụ. Ọhụrụ ndị ọbịa dị ka Florida ugbu a nwere njikọ ikuku na-enweghị nkwụsị na Aloha steeti. Nke a bụ ihe a na-apụghị iche n'echiche ọbụna n'oge kachasị mma.
Na 2019 Ndị ọbịa nke ndị ọbịa bịara ọfụma. Na Septemba 2019 17,945 ruo 22,234 ndị njem rutere Hawaii kwa ụbọchị. Na Septemba 2020, n'etiti ọrịa Corona, ọnụ ọgụgụ a bụ naanị 1,199 - 2,433 kwa ụbọchị. Nọmba ndị a dịkarịrị ala n'ọnwa ndị bu ụzọ.
Na March 2019, nkezi nke ndị njem 19,985 ruo 28,292 bịarutere kwa ụbọchị, na Machị nke afọ 2020 mgbe Coronavirus na-erubeghị nnukwu nsogbu maka ọnụọgụ US dịgasị iche n'etiti 18,144 - 26,896
Ọnụ ọgụgụ mbata fọrọ nke nta ka ọ pụọ n’agbata Eprel 2020 ruo Ọktọba 14, 2020. Hawaii kwere ka ndị ọbịa lọta n’abalị iri nke Ọktọba 15, 2020. Ihe achọrọ iji zere ịkpa oke kwagidere iwu bụ ihe na-adịghị mma COVID-19 nwapụtara ka US Mainland laboratories.
Ozugbo pasent nke ndị mbata jiri ya tụnyere oge nkịtị si na 2% gaa 20% wee kụọ 40% ọtụtụ oge n'etiti Ọktoba 15, 2020, ruo Febụwarị 2021
Otu afọ bi na ọnụọgụ ndị njem nje njem nje na-arị elu na Machị na-edekọ 8,241 kwa ụbọchị na mbido ọnwa ruo ndị njem 19,336 kwa ụbọchị.
Site na ọnụ ọgụgụ mbata dị otú a, Hawaii na-edekọ 60% ma ọ bụ ndị na-abịarute oge n'oge a, mana nke a bụ ihe nwere ike ịnwe obi ụtọ.
Ka ọ dị ugbu a, emechibidoro ókè United States na ọtụtụ mba. Nbanye site na ahịa mba ụwa kachasị mkpa gụnyere Canada, Japan, South Korea, China, Australia amalitebeghị. Gbọ elu anaghị arụ ọrụ ugbu a na ndị ọbịa si Japan dịka ọmụmaatụ ga-achọ ịdebe ihe ndị chọrọ iche iche mgbe ha laghachiri.
Hawaii tinyere ndị gọọmentị etiti na-arụkọ ọrụ na nkwekọrịta na mba iji weghachite ndokwa njem nchebe na ahịa mba ofesi. Hawaiian ụgbọ naanị ụnyaahụ kwupụtara ndokwa doro anya na Japan na Korea ịmalite.
Ozugbo ahịa ndị a laghachiri n'ịntanetị, njem nlegharị anya nwere ike ịlaghachi na ọnụọgụ ọnụọgụ ọhụrụ ọhụụ Aloha Steeti.
onyoonyo gbara 2021 03 16 na 21 13 17
Hawaii nwere nsogbu kachasị dị ala na USA. Nlekọta nnweta siri ike iji nweta asambodo COVID-19 na-ezighi ezi ma ọ bụ chebe iwu iche iche adịla maka ọnwa. Onye ọ bụla nke na-adịghị erube isi na iwu mkpuchi, chọrọ ịkpapụ mmekọrịta mmadụ chere ihu na mpụ na iwu na Hawaii.
Ọtụtụ na Hawaii buru amụma na mmụba nke ikpe COVID-19 yana ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọbịa na-abịa. Nke a abụbeghị ikpe. Hawaii nwere ọnụọgụ ọrịa kacha dị ala na United States.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọrịa na-efe efe kwa nde mmadụ bi na United States bụ North Dakota nwere ọrịa 132,732. Onu ogugu US kwa nde bu 91,333. Na Hawaii, ọnụ ọgụgụ a bụ 20,024
Ọnụọgụ kachasị n'ọnwụ na US kwa nde mmadụ dị na New Jersey na 2,698. United States nkezi bụ 1,660. Ọnụego Hawaii bụ 319.
Onu ogugu ndi a bu ihe kpatara nkiti nke njem na njem nleta na Hawaii?
Ndị America na-enwe mmasị ịga mpaghara nwere obere nsogbu COVID-19. Ndị America nwere ike ọ gaghị adị njikere ịga mba ụwa.
Hawaii nwere ike mezuo inweta ọchịchọ ya iji dọta ndị njem gụrụ ezigbo akwụkwọ. Nke a bụ omume a hụrụ ugbu a. Hawaii nwekwara ike ịgbanwere elekwasị anya na ájá wee hụ ọdịbendị na ebe ndị ọzọ na-aga. Enwere ọtụtụ ihe na pipeline na ọ na-agbagharị nwayọ ka ọ ghara iteta asọmpi ahụ.
Dị ka nsogbu a niile Onye ikike njem nlegharị anya nke HawaiiNa, na State gị n'ụlọnga kenyere iji kwalite njem na-anọgide na nzuzo ma dị jụụ adịghị alaghachi oku.
Hawaii nwere mmetụta dị omimi nke njem mba ụwa, mana nchekwa nke njem ụlọ. Kedu ihe ọzọ Hawaii ga-eji wee zube ndị America nọ na Florida ịhọrọ Aloha Na-achịkwa osimiri osimiri Caribbean?